Erdogan ma isku soo dhaweyn karaa quluubta kala qeybsantay ee dalkiisa? – Somali Broadcasting Service
Erdogan ma isku soo dhaweyn karaa quluubta kala qeybsantay ee dalkiisa?
Ka dib sanad kale oo ay doorasho ka dhacday dalka Turkiga oo uu ku guulestay Erdogan, ayaa waxay u egtahay in mar kale uu dalka aad u qeybsamay.
Siday arrintani ku dhacday?
Mucaaradka rajo badan ayay ka qabeen doorashadan. Waxay sameysteen isbaheysi, waxayna rajeynayeen in taageeradooda oo la isku daray ay wiiqi doonto aqlabiyadda baarlamaaniga ee xisbiga madaxweyne Erdogan.
Doorashada madaxtinnimadana waxay ku han weynaayeen in musharrraxa xisbiga bidix dhexe ee CHP, Muharrem Ince, uu guul soo hoyn doono. Waa nin aftahan ah, kasabadayna taageero badan sanadihii dhawaa.
Qiyaasaha qaar ayaa muujinayay in ugu yaraan uu sababi doono in Recep Tayyip Erdogan inuu galo wareeg labaad oo codbixin ah.
Korarkii uu ku socday dhaqaalaha Turkiga ayaa hakad ku yimid, iyadoo qiimo dhac uu ku yimid lacagta Turkiga ee Lira taasoo ka careysiisay dad badan oo taageero u hayay Erdogan.
Image captionMeral Aksener waa haweenay la tartantay Erdogan
Erdogan ayaa meesha ka saaray rajadii ay qabeen mucaaradka. Xarunta xisbigiisa waxaa qabsaday dabbaaldegyo ballaaran ka dib markii ay soo baxeen natiijooyinka hordhaca ee doorashooyinkii madaxtinnimada iyo kuwii baarlamaaniga.
” Erdogan wax kasta ayuu nooga dhigan yahay. Dalkan ma jireen la’aantiis,” mid ka mid ah taageerayaashiisa ayaa BBC-da sidaa u sheegay.
” Argagaxisada ayaa guul darreysatay, Qaranka Turkiga ayaana guuleystay” ayuu yiri taageere kale oo xambaarsan wiilkiisa oo madaxa ku xiran maran astaan u noqotay taageerada Erdogan. “Muslimiinta dhabta ah ayaa guuleysatay,” ayuu intaasi sii raaciyay.
labo arrimood oo la yaab leh ayaa dhacay oo u sii sahlay madaxweynaha guusha uu gaaray.
Midda hore waxay tahay in iskudarka codadka musharrixiinta la tartamayay Erdogan ee Muharrem Ince iyo Meral Aksener aysan u badnayn sidii la saadaalinyay.
Mr Ince codka uu helay ee 30.7% waxay aad uga badnayd qiyaasihii la sheegayay tan iyo markii uu ololaha ku soo biiray bishii April. Isbuuciyadii u dambeeyay waxaa banaabaxyadiisa ka qeybgalayay malaayiin qof.
Balse Ms Aksener – oo lagu naaneyso dawacada– oo mar loo arkayay inay tahay khatarta ugu wayn ee soo foodsaartay Erdogan ayaa heshay codad ka yar wixii ay filaysay.
Author adminmasterPosted on June 27, 2018 June 27, 2018 Categories Jeegaanland, Maqaalo-Fekerdo, News, Opinion, Politics, Puntland, Uncategorized
Previous Previous post: Wareysi Gaar ah R/wasaare ku xigeenka Soalia oo ka hadlay maalinta xoriyada
Next Next post: Waxaan isu kaaya qabanayn ‘midnimadu waa muqaddas’